Abaqokelwa uMlotha eNgilandi kufanele bavivinywe yi-Ireland e-Lord's | 1xbet
Kusekuseni lwe-Test yokuqala yase-England eyake yabhekana ne-Ireland mhlawumbe bekufanelekile ukuthi iphimbo, elicishe libe maphakathi nesikwele e-Lord’s, libukeke njenge-emerald luhlaza. Ngeke ngihlale ngumbala lowo isikhathi eside njengoba uzokhonjelwa umgodi ngoLwesithathu ekuseni kanye nocingo lokufudumeza ngemuva kwalokho. Yize iqembu lakhe laseNgilandi lithathe inkambo engajwayelekile yokukhetha ama-spinner amabili ngohlu olusebenzayo olusindayo.
URoot akazange angabaze ukuqamba igama lakhe emahoreni angama-24 ngaphambi kokuphonswa. Kuhlanganisa izivumelwano ezimbili: Jason Roy, ngezikhathi ezithile ze-Surrey, kanye ne-Olly Stone engasazi kangako, ngezikhathi ezithile eWarwickhire. Owedlule ubekelwe imisebenzi yaseNgilandi, eyedlule isanda kubekelwa eceleni inenkinga emuva. Zombili zidlala ngejubane, okubenza bathokozise.Ngaleso sikhathi abanye abathathu – uJack Leach, uRory Burns noJoe Denly – bazodlala imidlalo yabo yokuqala yeTest enhlabathini yasekhaya.Ireland kufanele isike ngesikhathi esivulekile esenziwa yilanga, hhayi isithunzi sesiNgisi kwaNkosi’s | U-Andy Bull Read more
Akunakwenzeka ukuthi i-Lord ikwazi ukuletha ileveli efanayo yenjabulo njengoba kwenzeka ngomhla ziyi-14 kuNtulikazi lapho iNew Zealand yayingabaphikisi futhi ikusasa leNdebe Yomhlaba lisengozini. Noma kunjalo kusenomqondo wokulangazelela okukhulu ngaphambi kwalolu Vivinyo lwezinsuku ezine.
KumaIreland lo ngokusobala wumdlalo obaluleke kakhulu lapho kuthengiswe khona ama-90% amathikithi ezinsukwini ezintathu zokuqala.Bayazi ukuthi baphupha kanjani, ngakho-ke mhlawumbe lapho ukuvakasha okulandelayo eDublin kwenzeka ku-wifi code ebhokisini lezindaba kuzobe sekuvuselelwa kusuka ku-“Bangalore 2011” (lapho i-Ireland ihlula iNgilandi eNdebeni Yomhlaba wonke) iye ku- “Lord 2019”. / p>
Abadlali besiNgisi kukhona futhi okuningi okufanele badlale ngakho. Umdlalo wenzeka ngosuku olwandulela uchungechunge lomlotha futhi uhlangothi lusesimweni sokuphakama okukhulu. Abadlali abaningi bayakulangazelela ukufaka usimende indawo. Phezulu kwe-oda Burns, ngemuva kwezivivinyo eziyisithupha kanye nesilinganiso sama-25, yisandla esidala.Manje uzojoyinwa nguRoy osakhula noDenly oneminyaka engama-33 kuNo 3 futhi osazodlala iTest yakhe yesithathu. uchwepheshe weNkosi, uTim Murtagh, ongafinyeleli ku-80mph, uzolandelwa ijubane likaMitchell Starc noPat Cummins e-Edgbaston. URoy, ikakhulukazi, kuzofanele afunde emsebenzini, kunokuba njengoJos Buttler ehlobo eledlule. Kodwa-ke bambalwa abakuthandayo ubukhona bakhe eqenjini, ikakhulukazi uma kubhekwa ezinye izindlela ezitholakalayo. . UJonny Bairstow, ohlanganyele namagilavu ​​wakhe, uzokube exabana nanhlanu noMoen Ali eneminyaka eyisithupha. Amathuba ukuthi bobabili laba badlali bazodonsa izindawo ezimbili kuza u-Edgbaston.Phakathi kwabadlali abashaya izindebe uChris Woakes, ongakaze adlale iTest for England kusukela umdlalo weTrent Bridge ngo-Agasti odlule, uzohlanganyela ibhola elisha noStuart Broad, omunye ongathanda ukukhumbuza abakhethiweyo ukuthi ubalulekile. Akunasizatho sokuthi noma yimuphi umdlali wase-England angakhungatheka ngenxa yalesi Sivivinyo. umcimbi. Kepha banokuhlangenwe nakho okuningi ngesimo sePorterfield, iMurtagh nesinye istrawwart yaseMiddlesex, uPaul Stirling, kanye noGary Wilson noKevin O’Brien, abahlukumeze iNgilandi ngobuhlakani bakhe e-Bangalore. Okwamanje, uBoyd Rankin, uma ekhethiwe, uba ikhilikithi lokuqala kusukela iNawab yasePataudi ngo-1946 ukuyodlala neNgilandi Kwezivivinyo.Akufanele kube nzima kangako ku-Rankin ukujabulela iTest yakhe yesithathu kunokuba abe ngowokuqala eSydney ngo-2014. Akukona lokho esikalini sokugcina seNdebe yoMhlaba ngakho-ke akukho okubalulekile ukuba nakho kuthelevishini engena emoyeni. Kodwa-ke, ngemuva kwalowo mgadli wokugcina uGuy Lavender, oyisikhulu esiphezulu seMCC, uchaze izinzuzo zokubeka ikhilikithi elisezingeni eliphakeme ngaphandle kwe-paywall futhi uphakamise ukuthi iSivivinyo seNkosi eyodwa kumele sibe semahhala njalo ehlobo. Lona akuwona umqondo omusha omusha. Ngonyaka odlule u-Ali Martin wasibeka phambili leso siphakamiso esifanayo.UJimmy Anderson ukuphuma kwe-Test yaseNgilandi ebhekene ne-Ireland nokulimala kwethole Funda kabanzi kanye nabaphathi be-Sky TV.Abalandeli bangemukela uhlelo olunje. Kepha lokhu akusona isiqinisekiso sokuthi womabili umzimba uzokwamukela uhlelo olulula kanjalo. Esikhundleni salokho izincazelo ezimbi futhi eziqinile zingalindelwa ukuthi kungani lokhu kungenzeki – ngezizathu zesivumelwano / sezepolitiki / zezezimali. Ngaphezu kwalokho, kungahle kudlule ku-The Hundred, lapho kutshalwe khona imali engu- $ 200m yi-ECB. esedlule kungenzeka sibe nokuqunjelwa okuthile. Bazothola izizathu eziningi zokuthi kungani leli cebo lingenakwenzeka. Amathuba wokunqoba kwe-Ireland lapha makhulu kakhulu kune-Test ye-free-to-air ye-Lord ethokozelwa ngumphakathi obanzi wekhilikithi ngokuzayo kwangaphambi kwesikhathi.